Sawirro: Muxuu yahay qorshaha socdaalka R/W Kheyre ee dalka Norway? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Muxuu yahay qorshaha socdaalka R/W Kheyre ee dalka Norway?
Sawirro: Muxuu yahay qorshaha socdaalka R/W Kheyre ee dalka Norway?
Muqdisho (Caasimada Online) – Wafdi uu hoggaaminaayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa goordhow ka Ambabaxay Magaalada Muqdisho, waxaana ay kusii jeeddaan dalka Norway sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Kheyre iyo Wafdigiisa ayaa waxa ay ka qeyb gali doonaan Shir looga hadlaayo Arrimaha Maaliyadda, kasoo ka furmaya dalka Norway, loona yaqaan Osolo Forum ama Madasha Oslo.
Shirka ayaa la filayaa inay ka qeyb-galaan madax ka socota dalalka deeqda bixiya, waxaana sida ay Caasimada Online xogta ku heshay ay dowladda qorsheyneysaa inay u bandhigto hindisayaal ku saabsan sidii ay u caawin lahaayeen Soomaaliya.